चस्मालाई बाफले छेक्यो? यस्तो छ उपाय – jagritikhabar.com
चस्मा लगाउर्नैपर्ने बाध्यता भएकाहरूका लागि मास्क थप बोझिलो बन्न सक्छ। चस्मा र मास्क लगाएको अवस्थामा सास फेर्दा बाफ सिधै चस्मामा गएर ुकुहिरीमण्डलु भएजस्तै देखिन्छ। चस्मामा बाफ गएर बस्दा सवारी चालकहरू अझ बढी समस्या हुन सक्छ। यसले दुर्घटनाको जोखिम पनि निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ।
चस्मालाई बाफबाट कसरी जोगाउने ?
हामीले कन्ट्याक लेन्सको प्रयोगले पनि यस्ता समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। कन्टयाक लेन्स आँखाको नानीमा बस्दा चस्मामा जस्तो बाफ जम्मा हुन पाउँदैन। कन्टयाक लेन्सको प्रयोगले चस्मामा हुने अनेक झन्झटबाट बच्न सकन्छि साथै हेर्दा राम्रो पनि देखिन्छ।
(कटेल तिलगंगा आँखा अस्पतालमा कार्यरत छिन्।)स्वास्थ्यखबरबाट